ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5သူကသင့်အလိုအပ်တာလဲသူ့ကိုသတိပေးပါအားဆင့်ဆိုရမည်မှာအရာ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 31 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဒါဟာသေးသင်ဂရုစိုက်တဲ့ကောင်လေးပြသသောအမှုအရာဟုမှတကယ်ကိုလွယ်ကူသည်, အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ကျနော်တို့ခွင့်ပြုဘို့နဲ့င်ကောင်လေးယူဘယ်မှာရေရှည်ဆက်ဆံရေး, ကျွန်တော်တို့မလေ့. အဲဒီလိုဗြောင်မေတ္တာပြည့်ဝသောအမူအယာအတိတ်နှင့်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အဆင်ပြေကြောင့်ဖြစ်နိုင်မှန်သည်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရောက်နေတူအများအားဖြင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အတွက်. သို့သော်တိုင်းတစ်ခါတစ်ခါနည်းနည်းရှိသေး၏, သင်ဂရုစိုက်ပြသရန်နှင့်သူသည်သင်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်တော်မူသောသူကိုယခုအခါစောစောပိုင်းကာလ၌ရှိနှင့် ပို. ပင်ပြုသကဲ့သို့နည်းတူအများကြီးသူ့ကိုသတိရဖို့ပြောနိုင် understated အမှုအရာ.
a nice 'Message text
သူအလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ရိုးရှင်းတဲ့ “သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုကောင်းစွာသွားမယ်လို့မျှော်လင့်” နေ့လယ်စာ-break ချစ်ခင်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အလွန်ကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်မည်ဟုစဉ်အတွင်း. ဒါဟာသူ့ကိုသင်စဉ်းစားနဲ့သင်ဂရုစိုက်ဖြစ်ကြောင်းပြသ. သူ့ကိုပြုံးသေချာကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
တံခါးပြင် The Way တွင်တစ်ဦး Nice Greeting
တူရာတစ်ခုခုဆိုလျက် “ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ” သို့မဟုတ် “ဂရုစိုက်ပါ” သူတို့အထဲကသူတို့လမ်းပေါ်မှာအခါသင်ဂရုစိုက်ပြလိမ့်မည်. ငါအရမ်းတန်ဖိုးထားကြလိမ့်မည်သေချာပါတယ်သော်လည်းအလွန်မကြာခဏနှုတ်ခွန်းဆက်သတဲ့နှုတ်ဆက်သကဲ့သို့သင်တို့ပြုပါအရာတစ်ခုခုမယ်လျှင်သင်နမ်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
သင်တို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကသူတို့ကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားကြကြောင်းဖော်ပြကြောင့်လူတွေကမိတ်ဖက်အတွက်ချစ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကသူတို့ကိုနားထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. သို့သော်မကြာခဏလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသူတို့နှင့်အတူနေသောလူတစ်ဦးတစ်ဦးကိုသူတို့အတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားယူနိုင်အောင်သင်လုပ်ဆောင်သောသူတို့အားပြသထားဘူးဆိုတာနားလည်မထားဘူး. ရိုးရှင်းစွာပဲအရမ်းအမှတ်မထင်စကားပြောထဲသို့ drop. အရာတစ်ခုခုနှင့်တူ, “သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြသယနေ့ညတွင်ဖြစ်သည်” သင်နားထောင်ကြပါပြသ.
သင်ကသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေမယ်လို့ထင်ရာပေါ်ဘာပြောတာလဲစစ်ကြောစီရင်တော်မူ. ဒါကြောင့်ဥပမာအားသူဂစ်တာကစားလျှင်သူသည်ကောင်းစွာတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားလာကစားမယ့်သူ့ကိုပြောပြ, သူဖက်ရှင်သို့င်လျှင်သူသည်ကောင်းစွာကြည့်ရှုသို့မဟုတ်သူဂီတကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကသူ့ကိုပြောပြသူဂီတနှင့် ပတ်သက်. အလွန်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့င်သူ့ကိုပြောပြ. တခါတရံငါတို့ရှိသမျှသည်ထူးဆန်းချီးမွမ်းများအတွက်ငါးဖမ်းနေကြသည်.
သူတို့ကိုသင် Love Them ကိုပြောပြပါ